मृत्युको मुखबाट परम् आनन्दतिर ⋆ JINDAGANI.COM
Home » मृत्युको मुखबाट परम् आनन्दतिर
मृत्युको मुखबाट परम् आनन्दतिर
असार २, २०७८	0	By शकुन्तला जोशी
माया ठकुरी भारतको लखनउमा जन्मिन्, सिलोङमा हुर्किइन् । उनका बुबा पाल्पा अर्घेलीका गोपालजंग राणा गम्भीरसिंह ठकुरी नामले भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएका रहेछन् ।
जीवनलाई फूलजस्तै बोध गरेको त्यो पल ४३ वर्ष छुटिसकेछ हगि ? ओहो ! कति चाँडै हिँड्दो हो समय, मलाई त हिजै जस्तो पो लाग्छ मेरी छोरी जन्मेको ।
तर यसपल्ट मसँग समयका सीमा थिएँ, मैले उनी जन्मिएको भारत, सिलोङको सम्झनालाई उनकी छोरी अनुराधाको जन्मकथासँग जोड्नु थियो । उनी नुवाकोटका सम्झनामा फर्किइन् । उनी आफ्नो पेटभित्रको बच्चाले लात्ती मारेको रोमाञ्चक अनुभूतितिर फर्किइन् ।
‘एक आमालाई राज्य नै दिन्छु भने पनि बच्चाको खुसीभन्दा ठूलो हुन सक्दैन,’ यसरी मातृवात्सल्यको कथा सुरु गर्नुअघि उनी आफ्नो बाल्यकाल सम्झिन्छिन् ।
गर्भवती हुँदा लाग्थ्यो– छोरा होस् या छोरी, जे भए पनि सग्लो, पूर्ण शारीरिक मानसिक विकाससहितको बच्चा जन्मियोस् । मनमनमा यस्तो कामना गरिरहन्थें ।
आमाले बच्चा उनको छातीबाट के उठाएकी थिइन्, उनको श्रीमानले रगतैसँगको बच्चा हत्त न पत्त लिएर च्याप्प छातीमा टाँसे । बुबाको माया अनुभव गर्नै नपाएकी उनको हृदय त्यो दृश्यले एकपल्ट बिथोलिएको थियो ।
जन्मनेबित्तिकै उनकी आमाले रगतैसँगै नाभी झुन्ड्याउँदै बच्चा हातमा राखिदिइन् । उनले छोरी जन्माएकी थिइन् । भन्छिन्, ‘कस्तो परम आनन्द लाग्यो भने अहिले व्याख्या गर्न सक्दिनँ । बच्चाको अनुहार हेरेपछि आँखै नहटाऊँ जस्तोे राम्रो… लाग्यो । मलाई त आफू कतै फूलैफूल भएको ठाउँमा उडें जस्तो, त्यसै–त्यसै जिउ चंगाजस्तो हलुका अनुभूति भयो । बच्चा हेरिरहँदा आफैं पो जन्मेजस्तो लाग्यो । वास्तवमा आफूबाट आफू नै जन्मनुको अनुभूति रहेछ त्यो ।’
आमाले बच्चा उनको छातीबाट के उठाएकी थिइन्, उनको श्रीमानले रगतैसँगको बच्चा हत्त न पत्त लिएर च्याप्प छातीमा टाँसे । बुबाको माया अनुभव गर्नै नपाएकी उनको हृदय त्यो दृश्यले एकपल्ट बिथोलिएको थियो । एक जुगपछि फेरि त्यो पल सम्झेर उनी एकछिन भावुक भइन् । उनीहरुले छोरीको नाम अनुराधा राखे । उनी चाहन्थिन् छोरीले उसको बुबाबाट सम्पूर्ण माया पाओस् । अनुराधाले आमाले चाहेभन्दा बेसी माया उनको बुबाबाट पाइन् । कहिलेकाहीँ त उनलाई श्रीमानले छोरीलाई गरेको माया देख्दा ईर्ष्या नै लाग्थ्यो ।
‘छोरी अनेक चकचक गरिरहेकी हुन्थी, म उसको आँखामा हेरिबस्थें । यसरी उसलाई हेर्नुमा म कहिल्यै थाक्दिनथें । त्यसलाई काखमा लिँदा अर्कै आनन्द, दुध खुवाउँदा अर्कै आनन्द, उसले छुकछुक गर्दै चकचक गरेको हेरिबस्नु अर्कै आनन्द ।
छोरीले प्रगति गर्दै गइन्, नेपाली बालसाहित्य लेखनमा उनको राम्रो दक्खल छ । सोही विषयमा उनी विद्यावारिधि पनि गर्दै छिन् । छोरीका दुई छोरा छन् । छोरी र नातिहरुको प्रगतिमा उनी आफ्ना अधुरा सपना पूरा भएको ठान्छिन् ।
‘बिहे हुँदा म नौ वर्ष थिएँ, तेरो बुबा एकतिसको हुनुहुन्थ्यो । तर म उहाँको श्रीमती थिएँ । म त कति समयसम्म रगतको आहालमा बस्थें ।’
हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी आख्यान विभाग प्रमुख उनी भन्छिन्, ‘म खान नपाएर भौतारिँदै हिँड्नुपर्ने बाल्यकालबाट गुज्रिँदै आज देशकै प्रमुख प्राज्ञिक संस्थाको पदमा छु, धेरै मिहिनेत र संघर्ष गरेर मैले यहाँसम्मको यात्रा गरें । यो ठूलो उपलब्धि हो । यद्यपि म जुन कुर्सीमा छु, मातृत्वको अनुभूति अगाडि यी सब क्षणभंगुर हुन् । मातृत्व त असाध्यै मीठो र आफूसँगै बाँच्ने अनुभूति हो ।’
अहिले समाजमा धेरै छोरीहरु बलात्कृत हुने, कतिपयको हत्या हुने गरेका समाचार सुन्दा उनलाई हैरान लाग्छ । महिलालाई वस्तुकरण गर्ने समाजको मानसिकतामाथि प्रहार गर्न, त्यो सोचलाई भत्काउन अझ धेरै काम गर्नु बाँकी रह्यो भन्ने उनलाई लाग्छ । उनी सानै छँदा आमाले भनेको सम्झिन्छिन्, ‘बिहे हुँदा म नौ वर्ष थिएँ, तेरो बुबा एकतिसको हुनुहुन्थ्यो । तर म उहाँको श्रीमती थिएँ । म त कति समयसम्म रगतको आहालमा बस्थें ।’ आमा कसरी रगतको आहालमा हुन्थिन् ? त्यो बेला उनले बुझिनन् ।’ अहिले नाबालिकाहरु बलात्कृत भएका समाचारहरु सुन्दा उनलाई लाग्छ– त्यो समयमा समाज, परिवारले नै विधिपूर्वक नाबालिकालाई बलात्कारको अनुमति दिँदो रहेछ ।
Tagsगर्भकथा माया ठकुरी
नारायणगोपालले सोधे,‘ तिमीहरू पैसा लिन्छौ रे हो ?’